Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị, ị ga-enwe ike ịkọwa ya
Edemede anyị na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke Ever Banega Akụkọ nwata, Eziokwu Biography, Ezinụ, Ndị nne na nna, Ndụ mbụ, ibi ndụ, enyi nwanyị / nwunye, Ndụ Onwe ya na ihe omume ndị ọzọ a ma ama malite n'oge ọ bụ nwata ruo mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ọgụgụ isi ya na ọgụgụ isi ya mana mana ole na ole na-ele Ever Banega's Bio nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Akụkọ nwata Banega na - Akụkọ mmalite na ndụ ezinụlọ:
A na-akpọkarị Maximiliano David Banega aha “Tanguito”A mụrụ na 29th ụbọchị nke June 1988 na Rosario, Santa Fe Argentina. Amuru ya nna ya, Daniel Banega na nne ya amaghi.
Banega sitere n'ezinụlọ dara ogbenye. Akụkọ nwata ya na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi. Ọ bụ akụkọ banyere onye nrọ na-eto eto nke si n 'ọhụhụ bilie iji nweta aha, aha na ọghọm dị ka etinyere n'isiokwu a.
Otú ọ dị, ọchịchọ Banega nke ịghọ ọkachamara n'ịgba ọsọ abụghị naanị ihe na-agafe agafe. A zụlitere ya n'ezinụlọ nke ụmụ nwoke na-etolite na Rosario na ụmụnne ya nwoke anọ bụ; Luciano, Cesar, Emiliano na Brian.
Banega malitere ịgba bọl na obodo Rosario, obodo ebe efu na-ejedebe maka obere ụmụ nwoke mgbe enwere bọọlụ n'ụkwụ ha na iko dị n'aka ha.
Rosario, obodo ebe o tolitere bụ ógbè Santa Fe, ihe dị ka kilomita 180 site na Buenos Aires (isi obodo Argentina). Ọ bụ obodo egwuregwu bọọlụ nwere ọnụọgụ mmadụ bi na otu nde na abụọ bụ nke kewara ụzọ abụọ abụọ.
Ndị na-eso Ellmụ nwoke ochie nke Newell (ụlọ ntorobịa Lionel Messi) na nke abuo, ndi na akwado ya Rosario Central, nke na - eme ka ndị kacha sie ike nke Argentina na Newell Old Boys. Ndị klọb ha gụnyere; Boca Juniors na Osimiri Plate.
Nke a site na itinye aka pụtara Rosario bụ obodo ebe Angel Di Maria, Lionel Messi, Mascherano na Ezequiel Lavezzi niile toro. Ndị ọzọ, gụnyere Ever Banega, maara ibe ha mgbe ha bụ ụmụ nwoke.
Ọ bụrụ na Banega Biography Akụkọ - Na-eto Eto:
Banega bịara site na ndị ntorobịa na Boca Juniors, na-erute ndị mbụ na 18, ma na-emeri mmata ozugbo n'ihi na ọ na-agafe agafe. Maka otu, na-echeta esemokwu ya na ndị na-eto eto Lionel Messi mgbe ọ ka na-amụ ọrụ aka ya na Newell's Old Boys.
Na-egwu egwu Lionel Messi n'oge ntorobịa ya, Banega kwuru;…“Ọ bụ igbu oge iji egwu megide Lionel Messi onye dika ya no na mgbe ahu yiri adaka. Messi mere anyi niile nzuzu. Ọ bụ obere dwarf na ngwa ya buru ibu karịa ya, mana ihe ọ na-eme adịlarị mma. "
Mgbe onye otu onye na-eme egwuregwu Fernando Gago kwagara Real Madrid na Jenụwarị 2007, a kpọrọ Banega dị ka onye ga-anọchi ya n'agbanyeghị nwata. N'oge ahụ na Boca Juniors, a na-enyekarị ya mkpọtụ mkpọtụ mgbe ọ bụla ọ hapụrụ ọkwa ahụ. Na 5th January 2008, ọrụ ebube ya bịara. Banega kpọrọ oku na Europe ka ọ kpọọ Valencia. Ndị ọzọ, dị ka ha ga-asị, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Valeria Juan na Ever Banega Hụrụ Ndụ Ndụ:
N'etiti nwoke ukwu ọ bụla, e nwere nnukwu nwanyị, ma ọ bụ ya mere okwu ahụ na-aga. Na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị agbụrụ Argentine ọ bụla, e nwere nwunye ma ọ bụ enyi nwanyị mara mma. Valeria Juan bụ nwunye na obi nwata nwata nke Ever Banega. A na-enyekarị ya otuto maka ịdebe omume di ya nke di na nwunye kemgbe ndị hụrụ ya n'anya zutere.
Amụrụ na October 5, 1986, Valeria dị afọ abụọ karịa di ya. Ọ bụ onye na-anwa ịchekwa ndụ nke onwe ya ma e wezụga oge dị mkpa, dị ka alụmdi na nwunye ha na ịhụnanya maka ndụ na-eme ụbọchị ọmụmụ ya.
Nke ọzọ metụtara ọmụmụ ụmụ ha. Dị ka n'oge ederede, di na nwunye ahụ nwere ụmụ abụọ; Agostina, a mụrụ October 11, 2010, na Romanella; a mụrụ June 8, 2016. N'okpuru ebe a, obere Agostina Banega nwere oge na-atọ ọchị na nne na nna ya mara mma.
N'ụlọ, e nwekwara Daisy, nkịta ha bụ okenye karịa Agostina pụtara na ya na ha nọrọ ruo ọtụtụ afọ. Dị nnọọ ka di ya, Valeria si Rosario na-agbanye mgbọrọgwụ na omenala Rosarian nke gụnyere ịme ụmụaka ka obere Agostina nye aka aka na kichin.
Ndụ Banega Banega:
Ever Banega sitere na nzụlite ezinụlọ dị n'etiti. Nna ya, Daniel Banega bụ onye na-abụbu onye na-agba ọsọ na-amakarị onye mechara bilie ịghọ onye nchịkwa nke otu Nuevo Horizonte n'afọ 1987. Ọ na-egwuri egwu maka otu ndị Argentine na mpaghara ha dị ala.
Otú ọ dị, ma Daniel Banaga na nwunye ya (nne nke Ever Banega) chụrụ ọtụtụ ihe iji lanarị ịda mbà n'obi nke Argentine 2001.
Taa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ezinụlọ Rosario niile nke dị ala na nke dị ala na-ejikọwanye ọnụ site na ncheta nke àjà ndị gara aga. “N’oge ụfọdụ, ihe fọdụrụnụ bụ ka anyị rie bụ apịtị mmiri; ọ bụ ihe siri ike nzụlite, ” Banega na-echeta oge ọ bụ nwata na nsogbu ezinụlọ.
Ọ dị mkpa iji mara na ma Banega na Angel Di Maria ezinụlọ adịwo nso kemgbe afọ. Ọ bụ ndị ezinụlọ nke ikpeazụ ahụ nyeere aka site n'ichepụta obere coal ha iji mee ka njedebe dị n'etiti egwuregwu Ever Banega dịka nwatakịrị.
E nwekwara ndị maara ezinụlọ nke Lionel Messi. onye si n’onu bara uba kari. Agbanyeghị, ezinụlọ ha enweghị nsogbu nke Argentina nke 2001.
Gwa eziokwu. Mbibi mberede nke Argentine peso pụtara na ụlọ ọhụrụ Newell enweghịzi nkwado Lionel Messi si ọgwụgwọ hormone. Nke a kpatara ya Lionel Messi si ezinụlọ ha kwagara Catalonia (Spain) mgbe ha dị afọ 13.
'Papa m na mama m nyere m ndụmọdụ ka mụ na ụmụnne m ga-arụsi ọrụ ike. Enweghị ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ egwuregwu mgbe m dị obere, ọ bụ naanị bọọlụ. Obi dị m ezigbo ụtọ na ihe niile ndị mụrụ m mere. Ha na-agba m ume mgbe niile. Enweghị ha na ọkachasị nwunye m, agaghị m enwe njem a dị ịtụnanya nke m na-eme ugbu a.
Dị ka e kwuru na mbụ, ọ bụ nwunye ya mere ka ihe gbanwee maka ya maka ịgbanwe àgwà ọjọọ ya. N'okwu nke mgbe;… “Abịara m mgbe m ruru afọ 19 ma mehie ihe. Egburu m ọtụtụ afọ ma chee echiche banyere ihe. Ugbu a, abụ m nwoke gbanwere, ekele dịrị Chineke na nwunye m, Valeria. ”
Ugbu a anyị na-ewetara gị ya ezughị okè na ihe ọjọọ nke Ever Banega. Gụọ ebe a!
Ọ bụrụ na na - Banega Biography Akụkọ - Akụkọ WebCam:
A na-ele Banega anya dị ka ihe na-adịghị mma, na-enweghị isi na iwe na omume ya nke mere ka ụlọ ọrụ Valencia tụfuo olileanya zuru ezu na ya. Eziokwu ka a gwara ya, njem $ 23-nde ya si Boca Juniors (Argentina) gaa Valencia (Europe) na Spain fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọchị mgbe ọ gasịrị.
N'ime ụbọchị ole na ole ọ bịarutere, vidio pụtara na Internet na-egosi Banega gba ọtọ “Na-emerụ ma na-eme ka ọ hisụ ọ forụ ya na-enwe n’ebe ndị bịara abịa dị” na kamera ya, Nke a dị ka ndị ọrụ Valencia si dị. Ihe oyiyi a na-ekwu na-egosi Banega mkparịta ụka na kọmputa ya tupu "Ilebara onwe ya anya".
O doro anya, oge echefughị ​​maka Argentine. Akụkọ mechara gosipụta na vidiyo ahụ bụ vidio ochie site na ụbọchị Boca nke afọ iri na ụma bụ nke megidere Valencia ihere.
Ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe ọ bụla - Banya Valencia:
Ever Banega etinyela ọnụma nke ndị Fans Valencia mgbe otu foto nke midfielder gosipụtara uwe elu nke ndị asọmpi Valencia Real Madrid nke pụtara na ịntanetị. Egburu foto a n'oge nleta ezinụlọ. O gosipụtara mgbe Banega na-amụmụ ọnụ ọchị ya na ndị ikwu ya abụọ.
Valencia aghaghị ịjụ onye na-elekọta midfielder ka ọ kọwaa ihe oyiyi ahụ, ebe ọ bụ na ha anaghị amọọ na Argentine ahụghachitela ihe kpatara ya niile. Enweghị nkọwa ọ bụla. Ụlọ ọrụ ahụ enweghị enyemaka na ikpe ya ma kwe ka ihe ahụ wee zuo ike.
Eziokwu nke Banega - Beinggbọ ala nke ya:
Onye na-egwu egwu Mgbe ọ bụla Banega jiri aka ya gbajiri ụkwụ ruo ihe dị ka ọnwa isii mgbe ụgbọ ala ya rutere. Nke a mere na February 2012.
Banega ghọrọ onye ọghọm nke onwe ya mgbe ọ kwụsịrị ijikwa ụgbọ ala ya na ọdụ mmanụ ụgbọ ala n'akụkụ ụzọ. Mgbe ọ na-ejuputa ụgbọ ala ya na ebe a na-ere mmanụ ụgbọala, ndị ọgba bọọlụ Argentine chefuru itinye breeki aka ka ọ si n'ụgbọala ahụ pụọ wee gawa n'akụkụ ụzọ.
Nke a mere ka ụgbọ ala ya na-aga ma na-agafe ya. Ihe mberede ahụ hapụrụ trauma na aka ekpe ya nke kpatara mgbaji ụkwụ na tibia ya. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị Valencia hụrụ ya n'anya, ụfọdụ kpasuru ndụ ya na-adịghị mma.
Ihe ndị nwere iwe were bụ na ihe mberede ahụ mere n'ehihie nke asọmpi nke abụọ nke Valencia na nke ikpeazụ Copa del Rey na Barcelona. Ọ bụ egwuregwu nke ọgbakọ chọrọ ya. Onye ọkpụkpọ Argentine ga-enwerịrị egwuregwu ahụ, n'agbanyeghị mmegide njikwa Pep Guardiola na-eto eto na-eto eto.
Mgbe mberede Banega - Ferrari na-agbawa ọkụ:
Ná mmalite nke oge 2012, Banega's Ferrari gbawara ọkụ mgbe ọ na-aga ọzụzụ ọzụzụ Valencia. Onye midfielder na-aga ebe ọ na-agagharịghị, ma eji ụgbọala 250,000 ya zuru ezu. A sịrị Banega ka ọ rịọrọ ndị na-agafe agafe-site na ịwụ mmiri iji wepụ ọkụ. N'ụzọ dị mwute, ụta bọmbụ ahụ rutere n'ihu onye ọ bụla merụrụ ahụ.
Eziokwu mgbe ọ bụla - oriri nke mmanya na-aba n'anya:
Mgbe Valencia gbazinyere ya na Atletico Madrid, kaadị uhie, nnọkọ oriri na abalị na ịdọ aka ná ntị na-agbakwunye na aha ọjọọ nwa ya. A maara nke ọma na Argentine na-enwe ndụ abalị Spanish karịa ndị ọzọ na ndị otu ya. Ná mmalite nke ọrụ ya, a kọrọ na Banaga dọtara n'isi ụtụtụ (3:30 am) maka ịkwọ ụgbọala n'okpuru mmanya.
A kọkwara na mgbe midfielder bụ 24-afọ, ọ na-efu efu ọzụzụ na ụtụtụ Fraịde (na Valencia setịpụrụ maka egwuregwu crunch na Barcelona na Sunday mgbe Fraịdee). Ọtụtụ oku ekwentị ka akpọrọ ya mana ọ nweghị nzaghachi. Mgbe e mesịrị, a chọpụtara na Banega bịarutere ọzụzụ na-a drunkụbiga mmanya anya n'abalị gara aga. Nke a pụtara n'ụzọ nkịtị ọ na-a drankụ mmanya n'ime abalị.
Eziokwu nke Banega - Hotel Trashing:
N'oge ọkọchị nke 2007, Banega gụrụ na under-20 World Cup maka nwa afọ ya Argentina, n'akụkụ nke amasị nke Manchester City's Sergio Aguero.
A na-eto eto na-eto eto maka ihe omume ya na asọmpi na Canada nke Argentina meriri. Ụfọdụ n'ime ndị egwuregwu (gụnyere Banega, doro anya) kpebiri ime ememe mmeri ha site na ịchọta ụlọ ha.
Eziokwu nke Banega - Visa Visa Visa:
Dị ka e kwuru na mbụ, mgbe Banega bịanyere aka na Spanish n'akụkụ Valencia CF. N'ihi nkụda mmụọ n'ihi omume ya, ha nyere ya ego na Athletico Madrid ka o wee nwee ike ijikwa ya Diego Simeone. Mgbe o laghachiri na Atlético na 2014, ọ dị ka Valencia ka dịkwa mma na ọnụnọ ya. Ha kpebiri ịkwaga ya na Everton n'akụkụ England.
n'ihi na akụkọ banyere ya, Ụlọ Ọrụ Britain na-ahụ maka ịmịgharị nyocha na-agbanwe echiche ha maka ịme njem nleta ya n'oge ọ chọrọ ya. Ya mere, ọ kwagara Everton.
Daalụ maka ịgụ edemede Banega anyị. Ndị otu anyị gbara mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ ka anyị na-etinye Akụkọ nwata na Eziokwu banyere ndu of Tanguito.
Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a na mgbe, biko nweere onwe gị ikwurịta na ngalaba nkọwa.